I-Callaway FT-i Umqhubi: Omnye wabaqhubi be-Square Square kwiGalofu
Umqhubi we-FT-i u-Callaway oyisikwele, wayekho konke ukuxolela
Umqhubi weCallaway FT-i wayengumqhubi we square Callaway. Abaqhubi besikwele - oko kukuthi, abaqhubi abaneenkcukacha ze- square clubheads - bephakathi kwezinto ezifudumele kakhulu kwizinto zokusebenza zegalufa ngokufutshane malunga ne-2000-auvers (2005, 2006, 2007), kodwa yaphela emva koko. Abazange babambisane nabathengi.
Yayiyiphi inqaku? Iinwele zomqhubi wesikwele, kubandakanywa neCallaway FT-i, zinesimo esavumele ukuba iinqununu zentloko zithinte isisindo kude ne- clubface kunokuba kunokwenzeka kwiintloko zabaqhubi .
Le yindlela enye yokukhulisa umzuzu we-inertia .
Umqhubi wesikwele waseCallaway kunye nabanye abaqhubi abakhwele kwinqanaba lijolise ekuchanekeni kunokuba ibanga. Ingxaki yokuthengisa, iyavela, kukuba abadlali begalufu abanomdla bayathanda ukunyuka. Kukhangeleka kwe-FT-, njengabo bonke abaqhubi besikwere, bekunzima kakhulu kwidilesi , kwaye abaqhubi besikwere benza isandi esikhulu kwaye, kwiindlebe ezininzi zegalufu, i- bonk engeyiyo kwimpembelelo (kunokuba loo nto isithandwa kakhulu ).
Umqhubi we-Callaway FT-i waphuma ngasekupheleni kuka-2006. Lulandelwa ngumqhubi weCallaway FT-iQ, owayenomxholo wesikwere-sikwele kwaye wakhululwa ngo-2008. Ngethuba lomqhubi we-FT-iz, wakhululwa ngo-2010 , UClalaway ubuyele kwimimandla ye-clubhead ebonakalayo kumqhubi walo.
Xa sibheke kwinqaku lethu langaphambili kumqhubi we-FT-i ngezantsi, besibe nethemba elithembekileyo ngekamva labaqhubi abakhwele. Kodwa kunjalo, iteknoloji yenze ukuxolelwa okukhulu, kwaye ukuba unokuyifumana ukujonga kunye nesandi kukho ininzi yegolfu aba baqhubi besikwele abanokukunceda.
Ukuthenga iClalaway FT-i Driver Namhlanje
Umqhubi we-FT-i usekhona nakubathengisi namhlanje abajongene neeklasi zegalufu ezisetyenziswayo. Kodwa kusenokwenzeka ukuba ufumane enye entsha yegama: Sibonile i-Callaway ngokwayo ihambisa ii-FT-i kwi-Amazon (kunye ne-$ 500).
Unokujonga kwakhona iKlalaway Pre-Owned ukuze ubone ukuba nayiphi imodeli esetyenziswayo ifumaneka ngqo kwiinkampani.
Kwaye sincoma ukuba sifunde lo mqhubi kwisikhokelo sexabiso lePGA phambi kokuthengwa esetyenziselwa ukufumana umgangatho wexabiso langoku. Ngexesha lokubhala, basebenzise abaqhubi be-FT-i babethengisa i-$ 50.
I-Article yokuqala: I-Callaway FT-i Umshayeli wezinto eziza kuza?
Inqaku lethu langaphambili malunga nomqhubi weCallaway FT-i lishicilelwe kungekudala emva kokuba uCallaway eveze iqela, kwaye yapapashwa kuqala ngomhla wama-Dec 6, 2006. Ilandelayo ilandelayo:
I-Square ingaba yimilo yezinto eziza kubaqhubi. Ngokuqinisekileyo umlo we-Callaway FT-i, umqhubi we-Nike sikaSasquatch Sumo2 njengomqhubi wesibini ohamba phambili kwisikratshi esivela kumenzi omkhulu.
Kutheni abavelisi beqala ngokukhawuleza bexubusha kunye nesimo somdabu se-clubheads zetsimbi? Yintoni ehambayo malunga nekwere?
Konke malunga nomzuzu we-inertia , okanye i- MOI . Ephakamileyo ye-club ye-MOI, ukuxhatshazwa kwe-clubhead kukuguqula kwi-hits off-center. Ukuba ubetha ibhola kufuphi nomzwane womqhubi, umzekelo, ulindele ukuba i-clubhead iguqule umncinci. I-club ephezulu ye-MOI iya kunciphisa ubuncinane, iyanciphisa umonakalo ukusuka kwisiteyimu esingaphandle komgangatho uma kuqhathaniswa nomqhubi we-MOI ophantsi. I-club ephezulu ye-MOI iya kuba, ngokwemigqaliselo yomntu, ukuxolela .
Kwaye umqhubi ophethe isikwele unika iinjineli ezinetalente kunye nabakhi beeklabhu iindlela ezintsha zokunyusa i-MOI.
Emva koko, umgca wecala lomqhubi ohamba kwisikwere awukho kwi-head head shaped driver.
Umqhubi we-Callaway FT-i ubizwa ngokuba yiyona nkampani "eyona mqhubi phambili." Kwaye kubizwa nguGary Player "umqhubi ongcono kakhulu owake wandivuyela ukuyisebenzisa" (ewe, uMdlali useKhallaway payroll).
Umqhubi we-Callaway FT-i ufaka indlela yokwenza i-Fusion yenkampani ekwakheni i-clubhead, nje ngejometri entsha. Kuyi-460cc kwivolumu ye-clubhead, kunye nesisindo sokuqonda esibekwe kwicala elingemuva le-clubhead. I-FT-i ibuye isebenzise into eyenziwa yinkampani ethi "Complete Complete Design" ukujolisa kuMOI kuphela (into esivame ukucinga ngayo xa siva ukuxhaswa kwe-MOI - ukuphikisana kwi-centre-hits hits-to-toe), kodwa kwakhona MOI (ukumelana nokuphikisana kwi-center-hit hits-to-crown).
Umqhubi we-FT-i ufika kwiDraw , i-Neutral ne- Fade models, kwaye unomfanekiso omkhulu wekotanium yekiti ebizwa ngokuba yiCallaway.
Umqhubi we-Callaway FT-i ufumaneka kwiimodeli eziqhelekileyo kunye noTyelelo kunye neenguqu zabasetyhini kunye namabhinqa. Imodeli esemgangathweni inesakhiwo se-9, 10, 11 no-13; Umhlathi oqhelekileyo yi-graphite Speji yeFijikura 586.
Ingqungquthela yoTyelelo inobuso obuvulekileyo ngakumbi. I-loft version lofts i-8.5 ne-9.5, neenguqu ezisekhohlo ze-9.5 nazo ziyafumaneka. Umtshini oqhelekileyo we-Tour version ngu-graphite Speji ye-Fujikura 686.
Igosa eliphuma kwinxalenye yeClalaway FT-i umqhubi lwenzeka kwi-PGA Merchandise Show January 2007. Kuya kufumaneka kwiintengiso ekuqaleni koFebruwari 2007 nge- MSRP ye-$ 625 ngomqhubi.
I-Wilson Staff ye-2017 Iiklabhu zeGolf: I-D300 Driver kunye ne-Irons Lead
Ukufumanisa Ukulingana Kwakho kweTennis Racquet
Ukuhlaziywa kwe-Cleveland Mashie: Ulungelelwaniso olungcono kunokuba ubonakale
Yintoni i-Out Out Surfboard?
Usuku olungcono kakhulu lweSonto likaValentine Uhlazo olunxulumene nothando kunye nomtshato
50 Ukubhala ngokukhawuleza kukhuthaza iiNdaba, iiBlogs, Fiction, kunye nee-Essays
Iipatheni zokufundisa nokuHlela umntwana wakho
'Utshutshiso lweentsapho': Imithetho yoMdlalo
Ngaphandle kweNdawo phakathi kweNcwadi yokuHlola engekho
Kuphi i-Standard Standard Deviation Yokulingana neZero?
10 Iinkcukacha NgeDetroetroon, ongewona-Dinosaur "iDinosaur"